I-Acorn Nook @ Lazy Ballerina - I-Rustic Eco Tiny Home
Dingabledinga, South Australia, i-Australia
Indlu encane ibungazwe ngu-James
Le ndlu encane, iNook, yakhiwe ngaphansi kwezihlahla ze-oki. Ukuhlala okuphelele phakathi nenkathi yomshado wendawo, noma uma ufuna ukuphuma futhi uhlole.
Isitayela sokuthinta i-rustic kanye nezimiso ze-wabi-sabi, i-Nook ifakwe umbhede wendlovukazi nezindawo zasekhishini, okuhlanganisa i-bbq, ngisho nebhavu langaphandle! Le ndawo emangalisayo ilapha ukuze ujabulele indawo engenazo ingcindezi - vele uhlale, uphuze ingilazi yewayini, futhi uphumule ngenkathi ujabulela ukubuka kwasemaphandleni okuvela kuvulandi.
Uyathanda yini ukulala endaweni yokwenza iwayini onqenqemeni lwehlathi?
Ingxenye yeLazy Ballerina eNingizimu ye-Australia, le Eco Pod ihlezi onqenqemeni lweHlathi i-Kuitpo e-Dingabledinga. Kuhlanganisa nezindawo ezintathu ezifakwe kuGazethi zeNative Forest Reserves ezihlanganisa amahektha angama-469, indawo ezungezile ihlanganisa izinhlobonhlobo zezihlahla, izihlahlana kanye nezinhlobo zekhava yomhlabathi ezihlinzeka ngendawo yokuhlala ebalulekile yezinyoni zomdabu zase-Australia, izilwane ezihuquzelayo nezilwane ezincelisayo. Isitayela esinomuzwa we-rustic owenziwe ngezimiso ze-wabi-sabi (less-is-more) nguChris Clarke (SWALE Modular).
Cwilisa kubhavu ongaphandle, uzipholele kuvulandi, noma uhlale ngasemlilweni (lapho kungekona okokucima umlilo ngo-Dec-March) futhi ujabulele.
Ngezimpelaviki uma uzizwa ukhululekile, jabulela umnyango wegumbi lewayini, lapho ungajoyina khona ezinye izihambeli engadini noma wabelane ngepizza efakwa ngokhuni kanye nethonsi elibomvu.
"Indlela yokubaleka yasekhaya encane! Uma ubhekana namaqiniso ngemikhawulo yokuhlala ekhaya elincane khona-ke lokhu kuhle kakhulu. Ungakwazi ukuphumula futhi ulethe okokuzijabulisa kwakho, noma usebenzise le ndawo njengendawo yokuqala yokuhlola i-Kuitpo/McLaren Vale/Willunga Beautiful ubuhle/i-vibe nokuthula okungenaziphazamiso."
Ukufinyelela kalula ezindaweni zokudlela, izindawo zokudlela, izindawo zomshado, i-Wilunga Markets (ibanga lokuhamba ukuya eLazy Ballerina Winery).
Amadolobhana iMcLaren Vale, Willunga, Mt Compass kanye neMeadows cishe. ukushayela kwemizuzu engu-10.
Itholakala eduze kwaseBrookman Rd iyindawo ekahle yokuhlola indawo yasendaweni, okuhlanganisa ihlathi laseKuitpo, iNhlonhlo yeFleurieu, amabhishi aseningizimu ye-Adelaide (Port Willunga, Maslins, Aldinga kanye neSilver Sands eSellicks Beach) kanye ne-Adelaide Hills.
Sihlala eduzane kule ndawo nenja yethu enobungani uMia. Singakwazi ukusiza njengoba udinga uma unenkinga, kodwa ngaphandle kwalokho sikushiya ngokuthula ukuze uphumule.